Hoover H-Munatsii 700, ongororo yeiyi hombe mhepo yekuchenesa | Gadget Nhau
Miguel Hernandez | 05/06/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 27/05/2021 21:24 | General, Reviews
Midziyo yekuchenesa mweya chigadzirwa chinoramba chichiwedzera kuve chakakurumbira, kunyanya panguva ino apo mukume unova muvengi wekutanga wevagari venyika. Zvakafanana zvinoitika kana tichitaura nezvemaguta makuru, uko kusvibiswa kunogona kuburitsa mwero wemagasi mudzimba dzisina kukodzera hupenyu hwezuva nezuva uye dzinogona kukonzera zvirwere.
Tichangobva kuongorora dzimwe nzira muActualidad Gadget, uye nhasi tinounza iyo Hoover H-Anonatsa 700, yekunatsa mweya ine saizi hombe uye inosanganisira humidifier pakati pezvimwe zvakanaka. Tsvaga nesu zvirinani, uyezve zvakare nekushomeka kwayo.
2 Unhu hunhu uye kusefa
3 Use uye modes
4 Kuwedzeredzwa uye maonero emupepeti
Hoover ikambani yechinyakare, iyo iwe yaunogona kurangarira nekuda kwekubudirira kwayo kukuru nevachenesi vekutsvaira munguva yakapfuura. Parizvino huwandu hwayo hwezvigadzirwa hwakagadziridzwa zvakanyanya, pakati pavo tinowana iyo H-Munatsi, yakanyatso kunakidza mira uye quasi-cylindrical mhepo yekuchenesa. Iyo yepazasi nzvimbo ndeye yefaira yekutsveta grille mune yesirivara vara, iri epurasitiki. Zvakafanana zvinoitika nechikamu chepamusoro, chena mapurasitiki patinowana maviri anodzoreka ekubata ekutakurwa, ruzivo rwekushanda uye nenzvimbo yepamusoro, kunoitika mashiripiti.
Colors: Sirivheri / Sirivheri + Chena
Iyi yepamusoro nzvimbo ine yakanatswa mweya yekubuda grille uye pani yekudzora ine yakatenderera LED iyo inoratidza mamiriro acho. Isu tine akasiyana siyana anoshanda mune ino yekubata pani iyo yatichataura nezvayo gare gare. Chikamu chekumashure chakasiiwa neprojekti uye chivharo chesefa. Kana uchiibvisa, tichawana tambo yekuunganidza tambo iyo inokosheswa chaizvo, kunyange hazvo hongu, tarasikirwa netambo yakati kurei tichifunga nezverudzi rwechigadzirwa chatiri kubata nacho. Sezvo iine otomatiki reel, tambo haigone kutsiviwa neyakareba imwe.
Unhu hunhu uye kusefa
Iyi Hoover H-Inochenesa 700 inoratidza WiFi uye kubatana kweBluetooth nenzira yakasanganiswa yekushandisa kuburikidza nechishandiso, chimwe chinhu chinoshamisika nekuda kwekuita kwakawanda. Iyo zvakare ine yekuvheneka sensor yeakakwira mwero weakabhoni dhayokisaidhi, pamwe neyakaipisa tembiricha uye hunyoro sensor, chimwe chinhu chinokosheswa tichitarisa nzvimbo yechigadzirwa uye kuti rakakosha sei mhando iyi yedata iri mukushandiswa kwezuva nezuva. Kune rimwe divi, isu zvakare tine 2,5 uye 10 nm particle sensor. Pachedu, Ini ndinofunga iye ane PM 2,5 angave akwana.
Filter mutengo: 59 euros
Pamusoro tine chiwoniso chinotizivisa nezvehunhu hwemhepo munguva chaiyo. Tine yambiro yekuchengetedza firita, yatichakurukura pazasi. Isu tine matatu marara e filtration ine ishe yekunze firita, Hera H13 firita uye inoshanda kabhoni firita izvo zvinotibvumidza kuti tienderere mberi nekumisa mukume, kunyanya kunakidza kune vanorwara. Nekudaro, chishandiso ichi chinofungidzirwa kuti chakakodzera nzvimbo kusvika pamamita zana negumi, takachiyedza munzvimbo dzinosvika makumi mashanu nemashanu emamirimita. Iyo ine VOC kubviswa uye iyo yakakwira yekucheneswa cubic metres paawa ichave iri 110, kubvisa 99,97% yezvakanaka zvikamu.
Use uye modes
Iyo Hoover H-Inochenesa 700, iyo yaunogona kutenga paAmazon, Iyo ine matatu ekutanga modes: Husiku, Auto uye Maximum, iyo ichagadziriswa kuburikidza nekubata pani uye kuburikidza nekushandisa. Kunyange zvakadaro, Tichavawo nehumidifier uye inonhuhwirira diffuser, iyo yatinogona kuzadzikisa pamwe nezvigadzirwa zvinosanganisirwa mupakeji. Iko kuwedzera kunonakidza kune iyo humidifier iyo isipo zvakadaro mune mazhinji ekumusoro-ekupedzisira ekuchenesa mweya, saka ndeimwe yekuwedzera.
Dhawunirodha iyo yekare Hoover app
Dhawunirodha iyo itsva Hoover app
Kune chikamu chayo, kuburikidza ne kushandiswa tinogona kumisikidza iyo H-Munatsi kuti ishandise kuburikidza vaviri vanozivikanwa kwazvo vabatsiri, tinotaura nezvazvo Amazon's Alexa uye Google Mubatsiri. Muzviitiko zvese izvi, ichave yakabatanidzwa mune yedu runyorwa rwezvigadzirwa uye ichatibvumidza kuvhura chishandiso uye kudzima madiro, pamwe nekurongedza mashandiro kunze kwechikumbiro chakapihwa naHoover iye. Iko kunyorera kunogona kuvandudzwa, ine mushandisi interface iyo inotiyeuchidza zvakawanda zvezvimwe zvakasarudzika zvigadzirwa zveAsia mavambo, zvisinei, inoita izvo zvainovimbisa.
Kuwedzeredzwa uye maonero emupepeti
Tine muH-Muchenesa 700 iyo H-Essence renji, inova nhevedzano yemabhodhoro madiki emafuta akakosha anozoiswa zvakananga, nebhodhoro riri mumudhirivhari. Izvi zvinoreva kuti mukufunga tinogona chete kushandisa Hoover akakosha maoiri sezvo bhodhoro richikwana mumudziyo. Zvisinei, chokwadi ndechekuti iwe unogona kuzadza iri bhodhoro kana iwe uchida nevechitatu-bato yakakosha mairi, chimwe chinhu chandinokurudzira kuchengetedza mari. Izvi hazvisizvo nefaira, iro rinoratidzika kunge rakazara, asi isu hatikurudzire kukwenya, kunyanya muchiitiko ichi nekuti mutengo unodhura uchienzaniswa nevanokwikwidza pamusika. Isu zvakare tine H-Biotic, huwandu hwesimba remishonga inouraya utachiona uye maprobiotic anounzwa mumuchina.
Kuyerera kwemweya kuri muchimiro 360º, zvisinei, ma sensors akandipa zviyero zvakati siyanei pane zvimwe zvigadzirwa zviri kumusoro-kumagumo. Iyo yakanatswa mhepo pombi inoita senge ine simba sekugona kutarisirwa kubva kuchigadzirwa chinovimbisa kusvika pamamirimita mazana matatu paawa, pamusoro pezvo, izvi zvinokanganisa kunyarara, uko pakumhanya kwakaderera kunogamuchirwa, asi muhusiku modhi haina sezvandaitarisira. Kune vanhu vane chinetso chekurara vane ruzha, iyo H-Munatsi inoda kudzimwa. Ichi chave chiri chiitiko chedu neH-Anochenesa 300.
Iyi H-Munatsi inotipa imwe nzira pamutengo usinganyanye kukwirisa, uyo usina kuregedza mukuwedzera seye humidifier, ma sensors kana iyo yekupa yezvinhu, asi mune zvimwe zvinhu inoramba iri nhanho pazasi pevamwe vanochenesa vekumusoro-soro saDyson kana Philips. Nekudaro, musiyano wemutengo unozivikanwa uye unototipa imwe kugona. Chinhu chakaipisisa mune yedu ruzivo iko kunyorera, zvirinani mushanduro yayo yeIOS. Unogona kuwana H-Kunatsa 700 kubva pa479 euros paAmazon.
Yakatumirwa pa: 5 June we2021
Kubatana uye app
Yakakura nhamba ye sensors
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Hoover H-Anonatsa 700, ongororo yeiyi hombe mhepo yekuchenesa